လူတ​ယောက်​ရဲ့ နာမည်ကိုသိရုံနှင့် စိတ်ဓါတ်ကိုပါသိနိုင်အောင်လို့ ​ဗေဒင်​တွက်ကြည့်​နည်း – Maythadin
May Thadin | October 21, 2020 | Knowledge, News | No Comments
သင့်ရဲ့ နာမည်ကို ကြည့်ပြီး သင့်ရဲ့ စိတ်နေ သဘာဝ ကို အကြမ်းဖျင်း တွက် လို့ ရတဲ့ နည်း ရှိတယ်။ သင့်ရဲ့လူသိများသောအမည်ကိုအောက်ပါအတိုင်းတွက်ပါ။
(အ-အာ-ဥ-ဩ-ဧ= ၁) (က-ခ-ဂ-ဃ-င=၂) (စ-ဆ-ဇ-စ်-ည. = ၃) (ယ-ရ-လ-၀. = ၄) (ပ-ဖ-ဗ-ဘ-မ. = ၅) (သ-ဟ. = ၆) (တ-ထ-ဒ-ဓ-န-ဌ. = ၇)
ဥပမာတွက်ပြမယ်။ ပန်း အိ ဖြိုး = ၅ + ၁ + ၅ = ၁၁ ရပါတယ်။ ၁၁ ထဲကနေ ၁၀ ကို နှုတ်ပါ၊ (၉နဲ့ ၉အောက်ဆို နှုတ်ပေးစရာ မလိုပါ၊ ၁၀ အထက်ကျော်ရင်တော့ နှုတ်ပေးရပါမယ်) (၁၁ – ၁၀ = ၁) ၀၁ ကြွင်းခေါ်ပါတယ်၊ ၁ ခုကြွင်းကို ကြည့်ပါ။
(၁) ရလျှင်မိတ်ဆွေသည် စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သူဖြစ်၏။ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှန်းချက် ပြင်းထန်သူဖြစ်၏။ ပြတ်သားထက်မြတ်သော စိတ်ဓာတ်ရှိသူဖြစ်၏။ လမ်းရိုးလမ်းဟောင်းကိုမလိုက်တတ်ဘဲ ဆန်းသစ်တီထွင်တတ်သူဖြစ်၏။ အယူအဆ ခိုင်မာရ်ျ ခေါင်းမာသူလည်းဖြစ်၏။
လက်တွေ့ဆန်ဆန် ပြုလုပ်တတ်သူလည်းဖြစ်၏။ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်၏။ ကျန်းမာရ်ျ ခံနိုင်ရည်ရှိသောသူဖြစ်၏။ သူတစ်ပါးအပေါ် စာနာတတ်ရ်ျ ကူညီတတ်သူလည်းဖြစ်၏။ သို့သော် တုန့်ပြန်မှု၊ ကျေးဇူးပြုမှုကိုမူ မရတတ်ပေ။ အထူးသဖြင့် ဆွေမျိုးသားချင်းများ၏ ဂရုပြုမှု၊
အလေးထားမှုများ မခံစားရတတ်ပေ။ မိတ်ဆွေကို အကဲခတ်ရ်ျ ဝေဖန်ရန် များစွာခက်၏။ အများနှင့် တပူးတွဲတွဲ မနေတတ်ပေ။ လွတ်လပ်စွာနေ၍ လွတ်လပ်စွာ​တွေးခေါ်တတ်သူဖြစ်၏။ ခေါင်းမာသော်လည်း သည်းခံတတ်၏။ မိတ်ဆွေ၏ ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းတစ်ခုကို
အများသူငါက တွေ့မြင်ပေလိမ့်မည်။ ယုံကြည်ချက် ပြင်းထန်သည်။ စိတ်စွမ်းအင် ကြီးမားသည်။ မိမိ၏ ခံစားမှုကို မပေါ်လွင်အောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်၏ အထင်လွဲမှုကို
မကြာခဏ ခံရတတ်သည်။ မိမိဖြစ်ချင်သောအရာကို ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သောလူဖြစ်သည်။ သူတစ်ပါးကို အားမကိုးတတ်ပေ။ အတိုချုပ်ဆိုရပါမူ အရည်အချင်းရှိသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။
(၂ ) ရလျှင်မိတ်ဆွေသည် စိတ်လှုပ်ရှားမှုများသူဖြစ်သည်။ လိမွာပါးနပ်သူလည်းဖြစ်သည်။ ကိစ္စတိုင်း အမှားမကျူးလွန်မိစေရန် သတိနှင့်နေထိုင်တတ်သူဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်၏ ချစ်ခင်လေးစားမှုကို ခံရသူလည်းဖြစ်သည်။ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့် စိတ်အားငယ်ခြင်းတို့
မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ စိတ်ကူးစိတ်သန်း အလွန်ကောင်းသည်။ မိတ်ဆွေ၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းမှုသည် မိတ်ဆွေဘဝကို ကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မည်။ ခံစားချက်ရှိသောကြောင့် ကဗျာဆရာများ၊ စာရေးဆရာများ၊ သီချင်းရေးဆရာများ ဖြစ်တတ်သည်။
စိတ်ပူပန်မှုလည်း အလွန်ကြီးမားသည်။ သေးငယ်သေကိစွကိုပင် ပူပန်တတ်သည်။ စိတ်ဓာတ်မတည်ငြိမ်မှုကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ မှားတတ်သည်။ တုံ့ပြန်မှုမြန်ခြင်းကြောင့် အလွဲလွဲအချော်ချော် ဖြစ်တတ်သည်။ ယုံကြည်မိသူ၊ လေးစားမိသူအပေါ် စွဲစွဲလမ်းလမ်းဖြစ်တတ်သည်။
ချစ်ခင်မှု အားကြီးသည်။ အစစအရာရာကို သတိနှင့် ပြုလုပ်တတ်သည်။ တစ်ဦးတည်း ဦးဆောင်မှုကို မလုပ်ဘဲ တစ်ယောက်ယောက်နှင့်ပူးတွဲပြီး လုပ်ကိုင်ရမှ ကျေနပ်သူဖြစ်သည်။
စကားပြောဆိုခြင်းနှင့် စာပေအရေးအသား ကောင်းတတ်သည်။အိမ်တွင်နေခြင်းကို မပျော်ပိုက်ဘဲ အပြင်တွင် အချိန်ဖြုန်းတတ်သည်။ ဘဝတွင် ကံဇာတာကောင်းသူများထဲတွင်ပါသည်။
(၃) ရလျှင်မိတ်ဆွေသည် အမြဲပင် အလုပ်ရှုပ်နေတတ်သည်။ ရောက်ရှိသောအခြေအနေတွင် ပျော်ပျော်နေတတ်သူဖြစ်၏။ အချိန်ကို အားလပ်ခွင့်မပေးဘဲ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကို လုပ်နေတတ်သူဖြစ်သည်။ မိမိနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောကိစွများတွင် စိတ်ဝင်စားတတ်သည်။
ဥပမာ အားကစားလိုက်စားရင်း အရက်သေစာသောက်စားခြင်းကို စိတ်မဝင်စားတတ်ပေ။ ဆက်ဆံရေး အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ သူတစ်ပါးကို စိတ်ဝင်စားအောင် ပြော နိုင်သူလည်းဖြစ်၏။ စိတ်ကူး စိတ်သန်း အလွန်ကောင်းပါသည်။ အကင်းပါးသူဖြစ်သောကြောင့် သူတစ်ပါး၏
ခုတုံးလုပ်ခြင်း၊ နှပ်ချခြင်းကို မည်သည့်အခါမှ ခံရမည်မဟုတ်ပေ။ အခွင့်အရေးပိုယူခြင်း၊ သစွာဖောက်ခြင်းမျိုးကိုမည်သည့်အခါမျှမလုပ်တတ်။ လုံ့လဝိရိယရှိသူလည်းဖြစ်သည်။ ခပ်တည်တည် နေတတ်သောကြောင့် မိတ်ဆွေနည်းသူလည်းဖြစ်သည်။ နည်းသောမိတ်ဆွေတွေက
သစ္စာရှိသည်။ မြင့်မားသော ရည်ရွယ်ချက်များ ထားရှိတတ်သူလည်းဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားတတ်သူလည်းဖြစ်သည်။ ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသော်လည်း ဝါဝါမြင်တိုင်း ဦးချမည့်သူမဟုတ်ပေ။ လွယ်လွယ်နှင့် မယုံတတ်ပေ။ ယုံပြီဆိုလျှင်လည်း စွဲမြဲတတ်သည်။
အခက်အခဲတွေ့ပါက စိတ်ကူးယဉ်မနေဘဲ လက်တွေ့ကျကျ ဖြေရှင်းတတ်သူလည်းဖြစ်သည်။ မည်သို့ဆိုစေမိတ်ဆွေသည် လူတော်လူကောင်းတစ်ဦးဟု ဆိုနိုင်ပေသည်။
(၄) ရလျှင်မိတ်ဆွေသည် မျက်နှာသွင်ပြင်ဟာ တစ်ခြားသူနဲ့မတူပဲ တမူ ထူးခြားနေတယ်။ ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတဲ့ မျက်နှာမျိုး ရှိတယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူမိတ်ဖွဲ့လို့ မရဘူး။ တစ်နည်းတစ်ဖုံ ခွတီးခွကျ ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ အများတကာနဲ့လည်း အယူအဆချင်း မတူပဲတစ်မျိုးတစ်ဖုံ
ကွာဟနေတတ်တယ်။ စည်းကမ်းတွေအမိန့်တွေကို မနာခံတတ်ဘူး။ (၄)-ဂဏန်းသမားတွေဟာ မမျှော်လင့်ပဲရတနာပုံဆိုက်သလိုကြီးပွား တတ်တယ်။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းရှိရင်လည်း
အနည်းစုပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အဲဒီ အနည်းစုကလည်း သူ့အပေါ်အင်မတန် သစ္စာရှိတဲ့လူတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ အများအားဖြင့် သိုက်တို့ နတ်တို့ ဘိုးတော်တို့ကိုယုံကြည်တတ်ကြသည်။
(၅) ရလျှင်မိတ်ဆွေသည် သည်းခံစိတ်ရှိပြီး စိတ် ရှည်သူဖြစ်၏။ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားကို လည်းနားလည်သူဖြစ်၏။ အပေါင်းအသင်းပေါင်းရာတွင် စိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ်ပြီးမှ ပေါင်းတတ်သူဖြစ်သည်။ စိတ်ခံစားမှုလွယ်ကူသော်လည်း မျိုသိပ်နိုင် သူ ဖြစ်သည်။ သူတစ်ပါးအား
ဆွဲဆောင်နိုင်သော စွမ်းအားရှိသည်။ မိတ်ဆွေသည် စိတ်ဆိုးခဲ၏။ စိတ်ဆိုးလျှင်လည်း တော်တော်နှင့်မပြေတတ်ပေ။ မိတ်ဆွေသည် မိသားစု၊ သားသမီးအပေါ် သံယောဇဉ်ကြီးသူဖြစ်သည်။ သို့သော် သားသမီးအကျိုးမခံစားရတတ်ပေ။ သိမ်သိမ်မွေ့​မွေ့နေထိုင်တတ်သူဖြစ်သည်။
ကြင်နာစိတ်ကြီးမားသူ လည်းဖြစ်သည်။ ရက်ရောမှုရှိသည်။ မည်သည့်အခါမျှ တစ်ကိုယ်ကောင်းမဆန်တတ်။ အကြီးအကျယ် မကျေမနပ် ဖြစ် ပါက မည်သူ့မျက်နှာကိုမျှ မထောက်ထားဘဲ လုပ်ချင် သလိုလုပ်ပစ်တတ်သည်။ မိတ်ဆွေသည် အပျော် အပါးကို နှစ်သက်သော်လည်း
လုပ်ရမည့်အလုပ်နှင့် စည်းခြားထားသူ ဖြစ် သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ မိမိကိုယ်ကို အထင်ကြီးလွန်းတတ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ မိမိ၏အရည် အချင်းထက် လျော့၍ပင် မိမိကိုယ်ကို အမှတ်ပေးတတ်သည်။ မည်သို့ဖြစ်စေသင်သည်ကောင်းမွန်သောသူတစ်ဖြစ်သည်မှာ မလွဲပေတဲ့။
(၆) ရလျှင်မိတ်ဆွေသည် သည်းခံစိတ်ရှိပြီး စိတ်ရှည်သူဖြစ်၏။ တာဝန်နှင့်ဝတ်တရားကိုလည်း နားလည်သူဖြစ်၏။ အပေါင်းအသင်းပေါင်းရာတွင် စိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ်ပြီးမှ ပေါင်းတတ်သူဖြစ်သည်။ စိတ်ခံစားမှုလွယ်ကူသော်လည်း မျိုသိပ်နိုင်သူဖြစ်သည်။
သူတစ်ပါးအား ဆွဲဆောင်နိုင်သော စွမ်းအားရှိသည်။ မိတ်ဆွေသည် စိတ်ဆိုးခဲ၏။ စိတ်ဆိုးလျှင်လည်း တော်တော်နှင့် မပြေတတ်ပေ။ မိတ်ဆွေသည် မိသားစု၊ သားသမီးအပေါ် သံယောဇဉ်ကြီးသူဖြစ်သည်။ သို့သော် သားသမီးအကျိုးမပေးလှပေ။ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ နေထိုင်တတ်သူဖြစ်သည်။
ကြင်နာစိတ်ကြီးမားသူဖြစ်သည်။ ရက်ရောမှုရှိသည်။ မည်သည့်အခါမျှ တစ်ကိုယ်ကောင်းမဆန်တတ်။ အကြီးအကျယ် မကျေနပ်မှုဖြစ်ပါက မည်သူ့မျက်နှာကိုမျှ မထောက်ဘဲ လုပ်ချင်သလို လုပ်ပစ်တတ်သည်။ မိတ်ဆွေသည် အပျော်အပါးကို နှစ်သက်သော်လည်း
လုပ်ရမည့်အလုပ်နှင့် စည်းခြားထားတတ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ မိမိကိုယ်ကို အထင်ကြီးလွန်းတတ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ မိမိ၏အရည်အချင်းထက် လျော့ရ်ျပင် မိမိကိုယ်ကို အမှတ်ပေးတတ်သည်။ မည်သို့ဖြစ်စေ သင်သည် ကောင်းမွန်သောသူတစ်ဖြစ်သည်မှာမလွဲပေ။
(၇) ရလျှင်မိတ်ဆွေသည် ညဏ်ရည်ညဏ်သွေးကောင်းသူဖြစ်သည်။ ထက်လည်းအလွန်ထက်မြတ်သည်။ အရာရာကိုမှန်ကန်စွာ​တွေးခေါ်ဆုံးဖြတ်တတ်သူဖြစ်သည်။ တစ်ယူသန်ခေါင်းမာတတ်သူလည်းဖြစ်သည်။ သူတစ်ပါး၏ထင်မြင်ချက်ကိုများစွာအရေးမထားတတ်သူလည်း
ဖြစ်သည်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု လွယ်ကူသော်လည်း ခံစားမှုများစွာ မရှိတတ်ပေ။ မိတ်ဆွေတွင် ကောင်းသော အရည်အချင်းတစ်ခု ရှိနေတတ်သည်။ ထိုအရည်အချင်းမှာ အရာရာကို ဂရုစိုက် လေ့လာတတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေမှာ ထူးခြားသောဟန်အမူအရာ၊
အသံနေအသံထား ရှိတတ်၏။ ဒေါသဖြစ်လွယ်သော်လည်း ပြေပျောက်မှုမြန်ဆန်တတ်၏။ သစ်လွင်တောက်ပသော အဝတ်အစားများကို မနှစ်သက်တတ်ပေ။ မိတ်ဆွေလုပ်သော အလုပ်အကိုင်ကို နှောင့်ယှက်ပါက လွန်စွာပင် မုန်းတီးတတ်သူဖြစ်သည်။
မိသားစုအပေါ် သံယောဇဉ်အလွန်ကြီးသူဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေမှာ ထူးခြားသော သံလိုက်ဓာတ်များ၊ ညို့ဓာတ်များ၊ သမထစွမ်းရည်များ ရှိနေတတ်သည်။
မိတ်ဆွေသည် တီထွင်တတ်သောညဏ်ရှိ၏။ မိတ်ဆွေနှင့် တွေ့ကြုံ ဆုံဆည်းသူများက မိတ်ဆွေတွင် တစ်စုံတစ်ခု ထူးခြားနေသည်ဟု ထင်မှတ်သွားတတ်၏။
(၈) ရလျှင်မိတ်ဆွေသည် လက်တွေ့ကျကျ တွေးခေါ်တတ်ပြီး လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ကိုင်တတ်သူဖြစ်သည်။ တစ်ခုခုလိုချင်ပြီဆိုလျှင် တမ်းတမ်းစွဲဖြစ်တတ်သည်။ စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်ရ်ျ အောင်မြင်ထွန်းပေါက်အောင် လုပ်တတ်သူလည်းဖြစ်၏။ မကြာခဏ သူတစ်ပါး၏
အထင်အမြင်လွဲမှားမှုကို ခံရတတ်သည်။ အစဉ်သဖြင့် အားနည်းသူဘက်က ပါဝင်ကူညီတတ်သူဖြစ်၏။ မိမိကိုယ်ကို လွန်စွာအားကိုး၏။ သူတစ်ပါးကို အထင်မကြီးတတ်လှပေ။ ထက်မြက်ပါးနပ်သောသူဖြစ်၏။ ကျယ်ပြန့်သော ဗဟုသုတရှိသူလည်းဖြစ်၏။
ကျယ်ပြန့်သော ဗဟုသုတရှိသူလည်းဖြစ်သည်။ စာပေရေးသားမှု ပြောင်မြောင်တတ်သည်။ အချိုးကျကျ ဝတ်စား၍ အထက်တန်းကျကျ နေထိုင်တတ်သူဖြစ်သည်။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် အိမ်ထောင်ကျတတ်သည်။ ဒုကွများနှင့် မကြာခဏ ရင်ဆိုင်တိုးသော်လည်း ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်သူဖြစ်သည်။
(၉) ရလျှင်မိတ်ဆွေသည် စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသူဖြစ်သည်။ စိတ်ဆိုးလွယ်၊ ဒေါသဖြစ်လွယ်တတ်၏။ စိတ်ကြီးသလောက် ဇွဲလည်းဖြစ်သူဖြစ်၏။ ချုပ်ချယ်မှုကို မနှစ်သက်တတ်။ စိတ်မြန်လက်မြန် လုပ်တတ်သည်။ ဆွေမျိုးများ၊ မိသားစုများနှင့် မကြာခဏ အဆင်မပြေဖြစ်တတ်သည်။
မိတ်ဆွေ၏ စကားပြောဟန်ပန်မှာ အမိန့်ပေး၊ သြဇာပေးသကဲ့သို့ ရှိတတ်၏။ စကားအချေအတင်ပြောမှု၊ ငြင်းခုန်မှုကို အလွန်နှစ်သက်တတ်သူဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးသော်လည်း မိမိစိတ်ကိုမိမိ နိုင်သူဖြစ်သည်။ အခြားသူများ၏ တားမြစ်မှုကို ချိုးဖောက်တတ်သည်။
မိမိဘာသာ အသိတရားနှင့် မလုပ်သင့်သည်ကို ရှောင်တတ်သည်။ စိတ်စွမ်းအင်ကြီးမားသူဖြစ်၏။ ဆုံးဖြတ်ချက်မြန်ရ်ျ မှန်ကန်တတ်သူဖြစ်သည်။ မိမိဖြစ်ချင်သောဘဝကို မိမိဘာသာ ကြိုးစားရ်ျ ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သူများဖြစ်သည်။ မည်သို့ဆိုစေ မိတ်ဆွေသည် လူတော်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
Myanmar Express ဆရာဇော်မင်းထက်ရေးသားထားသည့် ဗေဒင်ပညာအကြောင်း ပြန်လည်ဝေမျှပါသည်။ ခရက်​ဒစ်​
(အ-အာ-ဥ-ဩ-ဧ= ၁) (က-ခ-ဂ-ဃ-င=၂) (စ-ဆ-ဇ-ဈ-ည. = ၃) (ယ-ရ-လ-ဝ. = ၄) (ပ-ဖ-ဗ-ဘ-မ. = ၅) (သ-ဟ. = ၆) (တ-ထ-ဒ-ဓ-န-ဌ. = ၇)
ဥပမာတှကျပွမယျ။ ပနျး အိ ဖွိုး = ၅ + ၁ + ၅ = ၁၁ ရပါတယျ။ ၁၁ ထဲကနေ ၁၀ ကို နှုတျပါ၊ (၉နဲ့ ၉အောကျဆို နှုတျပေးစရာ မလိုပါ၊ ၁၀ အထကျကြျောရငျတော့ နှုတျပေးရပါမယျ) (၁၁ – ၁၀ = ၁) ၀၁ ကွှငျးချေါပါတယျ၊ ၁ ခုကွှငျးကို ကွညျ့ပါ။
(၁) ရလြှငျမိတျဆှသေညျ စိတျဓာတျကွံ့ခိုငျသူဖွဈ၏။ ရညျရှယျခကျြ၊ ရညျမှနျးခကျြ ပွငျးထနျသူဖွဈ၏။ ပွတျသားထကျမွတျသော စိတျဓာတျရှိသူဖွဈ၏။ လမျးရိုးလမျးဟောငျးကိုမလိုကျတတျဘဲ ဆနျးသဈတီထှငျတတျသူဖွဈ၏။ အယူအဆ ခိုငျမာရျြ ခေါငျးမာသူလညျးဖွဈ၏။
လကျတှဆေ့နျဆနျ ပွုလုပျတတျသူလညျးဖွဈ၏။ ပြျောပြျောရှငျရှငျနတေတျ၏။ ကနျြးမာရျြ ခံနိုငျရညျရှိသောသူဖွဈ၏။ သူတဈပါးအပျေါ စာနာတတျရျြ ကူညီတတျသူလညျးဖွဈ၏။ သို့သျော တုနျ့ပွနျမှု၊ ကြေးဇူးပွုမှုကိုမူ မရတတျပေ။ အထူးသဖွငျ့ ဆှမြေိုးသားခငျြးမြား၏ ဂရုပွုမှု၊
အလေးထားမှုမြား မခံစားရတတျပေ။ မိတျဆှကေို အကဲခတျရျြ ဝဖေနျရနျ မြားစှာခကျ၏။ အမြားနှငျ့ တပူးတှဲတှဲ မနတေတျပေ။ လှတျလပျစှာနေ၍ လှတျလပျစှာတှေးချေါတတျသူဖွဈ၏။ ခေါငျးမာသျောလညျး သညျးခံတတျ၏။ မိတျဆှေ၏ ပငျကိုယျအရညျအခငျြးတဈခုကို
အမြားသူငါက တှမွေ့ငျပလေိမျ့မညျ။ ယုံကွညျခကျြ ပွငျးထနျသညျ။ စိတျစှမျးအငျ ကွီးမားသညျ။ မိမိ၏ ခံစားမှုကို မပျေါလှငျအောငျ ထိနျးသိမျးနိုငျသညျ။ ပတျဝနျးကငျြ၏ အထငျလှဲမှုကို
မကွာခဏ ခံရတတျသညျ။ မိမိဖွဈခငျြသောအရာကို ဖွဈအောငျလုပျနိုငျသောလူဖွဈသညျ။ သူတဈပါးကို အားမကိုးတတျပေ။ အတိုခြုပျဆိုရပါမူ အရညျအခငျြးရှိသူတဈဦးဖွဈသညျ။
(၂ ) ရလြှငျမိတျဆှသေညျ စိတျလှုပျရှားမှုမြားသူဖွဈသညျ။ လိမှာပါးနပျသူလညျးဖွဈသညျ။ ကိစ်စတိုငျး အမှားမကြူးလှနျမိစရေနျ သတိနှငျ့နထေိုငျတတျသူဖွဈသညျ။ ပတျဝနျးကငျြ၏ ခဈြခငျလေးစားမှုကို ခံရသူလညျးဖွဈသညျ။ စိတျဓာတျကခြွငျးနှငျ့ စိတျအားငယျခွငျးတို့
မကွာခဏ ဖွဈပျေါလရှေိ့သညျ။ စိတျကူးစိတျသနျး အလှနျကောငျးသညျ။ မိတျဆှေ၏ စိတျကူးစိတျသနျးကောငျးမှုသညျ မိတျဆှဘေဝကို ကောငျးကြိုးပေးလိမျ့မညျ။ ခံစားခကျြရှိသောကွောငျ့ ကဗြာဆရာမြား၊ စာရေးဆရာမြား၊ သီခငျြးရေးဆရာမြား ဖွဈတတျသညျ။
စိတျပူပနျမှုလညျး အလှနျကွီးမားသညျ။ သေးငယျသကေိစှကိုပငျ ပူပနျတတျသညျ။ စိတျဓာတျမတညျငွိမျမှုကွောငျ့ ဆုံးဖွတျခကျြမြား မှားတတျသညျ။ တုံ့ပွနျမှုမွနျခွငျးကွောငျ့ အလှဲလှဲအခြျောခြျော ဖွဈတတျသညျ။ ယုံကွညျမိသူ၊ လေးစားမိသူအပျေါ စှဲစှဲလမျးလမျးဖွဈတတျသညျ။
ခဈြခငျမှု အားကွီးသညျ။ အစစအရာရာကို သတိနှငျ့ ပွုလုပျတတျသညျ။ တဈဦးတညျး ဦးဆောငျမှုကို မလုပျဘဲ တဈယောကျယောကျနှငျ့ပူးတှဲပွီး လုပျကိုငျရမှ ကနြေပျသူဖွဈသညျ။
စကားပွောဆိုခွငျးနှငျ့ စာပအေရေးအသား ကောငျးတတျသညျ။အိမျတှငျနခွေငျးကို မပြျောပိုကျဘဲ အပွငျတှငျ အခြိနျဖွုနျးတတျသညျ။ ဘဝတှငျ ကံဇာတာကောငျးသူမြားထဲတှငျပါသညျ။
(၃) ရလြှငျမိတျဆှသေညျ အမွဲပငျ အလုပျရှုပျနတေတျသညျ။ ရောကျရှိသောအခွအေနတှေငျ ပြျောပြျောနတေတျသူဖွဈ၏။ အခြိနျကို အားလပျခှငျ့မပေးဘဲ တဈခုမဟုတျတဈခုကို လုပျနတေတျသူဖွဈသညျ။ မိမိနှငျ့ဆနျ့ကငျြဘကျဖွဈသောကိစှမြားတှငျ စိတျဝငျစားတတျသညျ။
ဥပမာ အားကစားလိုကျစားရငျး အရကျသစောသောကျစားခွငျးကို စိတျမဝငျစားတတျပေ။ ဆကျဆံရေး အလှနျကောငျးမှနျပါသညျ။ သူတဈပါးကို စိတျဝငျစားအောငျ ပွော နိုငျသူလညျးဖွဈ၏။ စိတျကူး စိတျသနျး အလှနျကောငျးပါသညျ။ အကငျးပါးသူဖွဈသောကွောငျ့ သူတဈပါး၏
ခုတုံးလုပျခွငျး၊ နှပျခခြွငျးကို မညျသညျ့အခါမှ ခံရမညျမဟုတျပေ။ အခှငျ့အရေးပိုယူခွငျး၊ သစှာဖောကျခွငျးမြိုးကိုမညျသညျ့အခါမြှမလုပျတတျ။ လုံ့လဝိရိယရှိသူလညျးဖွဈသညျ။ ခပျတညျတညျ နတေတျသောကွောငျ့ မိတျဆှနေညျးသူလညျးဖွဈသညျ။ နညျးသောမိတျဆှတှေကေ
သစ်စာရှိသညျ။ မွငျ့မားသော ရညျရှယျခကျြမြား ထားရှိတတျသူလညျးဖွဈသညျ။ မိမိကိုယျကို တနျဖိုးထားတတျသူလညျးဖွဈသညျ။ ဘာသာတရားကိုငျးရှိုငျးသျောလညျး ဝါဝါမွငျတိုငျး ဦးခမြညျ့သူမဟုတျပေ။ လှယျလှယျနှငျ့ မယုံတတျပေ။ ယုံပွီဆိုလြှငျလညျး စှဲမွဲတတျသညျ။
အခကျအခဲတှပေ့ါက စိတျကူးယဉျမနဘေဲ လကျတှကေ့ကြ ဖွရှေငျးတတျသူလညျးဖွဈသညျ။ မညျသို့ဆိုစမေိတျဆှသေညျ လူတျောလူကောငျးတဈဦးဟု ဆိုနိုငျပသေညျ။
(၄) ရလြှငျမိတျဆှသေညျ မကျြနှာသှငျပွငျဟာ တဈခွားသူနဲ့မတူပဲ တမူ ထူးခွားနတေယျ။ ထကျထကျမွကျမွကျရှိတဲ့ မကျြနှာမြိုး ရှိတယျ။ လှယျလှယျကူကူမိတျဖှဲ့လို့ မရဘူး။ တဈနညျးတဈဖုံ ခှတီးခှကြ ဖွဈလရှေိ့တယျ။ အမြားတကာနဲ့လညျး အယူအဆခငျြး မတူပဲတဈမြိုးတဈဖုံ
ကှာဟနတေတျတယျ။ စညျးကမျးတှအေမိနျ့တှကေို မနာခံတတျဘူး။ (၄)-ဂဏနျးသမားတှဟော မမြှျောလငျ့ပဲရတနာပုံဆိုကျသလိုကွီးပှား တတျတယျ။ မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးရှိရငျလညျး
အနညျးစုပဲ ဖွဈလိမျ့မယျ။ အဲဒီ အနညျးစုကလညျး သူ့အပျေါအငျမတနျ သစ်စာရှိတဲ့လူတှေ ဖွဈတတျတယျ။ အမြားအားဖွငျ့ သိုကျတို့ နတျတို့ ဘိုးတျောတို့ကိုယုံကွညျတတျကွသညျ။
(၅) ရလြှငျမိတျဆှသေညျ သညျးခံစိတျရှိပွီး စိတျ ရှညျသူဖွဈ၏။ တာဝနျနှငျ့ဝတ်တရားကို လညျးနားလညျသူဖွဈ၏။ အပေါငျးအသငျးပေါငျးရာတှငျ စိတျတိုငျးကြ ရှေးခယျြပွီးမှ ပေါငျးတတျသူဖွဈသညျ။ စိတျခံစားမှုလှယျကူသျောလညျး မြိုသိပျနိုငျ သူ ဖွဈသညျ။ သူတဈပါးအား
ဆှဲဆောငျနိုငျသော စှမျးအားရှိသညျ။ မိတျဆှသေညျ စိတျဆိုးခဲ၏။ စိတျဆိုးလြှငျလညျး တျောတျောနှငျ့မပွတေတျပေ။ မိတျဆှသေညျ မိသားစု၊ သားသမီးအပျေါ သံယောဇဉျကွီးသူဖွဈသညျ။ သို့သျော သားသမီးအကြိုးမခံစားရတတျပေ။ သိမျသိမျမှမှေ့နေ့ထေိုငျတတျသူဖွဈသညျ။
ကွငျနာစိတျကွီးမားသူ လညျးဖွဈသညျ။ ရကျရောမှုရှိသညျ။ မညျသညျ့အခါမြှ တဈကိုယျကောငျးမဆနျတတျ။ အကွီးအကယျြ မကမြေနပျ ဖွဈ ပါက မညျသူ့မကျြနှာကိုမြှ မထောကျထားဘဲ လုပျခငျြ သလိုလုပျပဈတတျသညျ။ မိတျဆှသေညျ အပြျော အပါးကို နှဈသကျသျောလညျး
လုပျရမညျ့အလုပျနှငျ့ စညျးခွားထားသူ ဖွဈ သညျ။ တဈခါတဈရံ မိမိကိုယျကို အထငျကွီးလှနျးတတျသညျ။ တဈခါတဈရံ မိမိ၏အရညျ အခငျြးထကျ လြော့၍ပငျ မိမိကိုယျကို အမှတျပေးတတျသညျ။ မညျသို့ဖွဈစသေငျသညျကောငျးမှနျသောသူတဈဖွဈသညျမှာ မလှဲပတေဲ့။
(၆) ရလြှငျမိတျဆှသေညျ သညျးခံစိတျရှိပွီး စိတျရှညျသူဖွဈ၏။ တာဝနျနှငျ့ဝတျတရားကိုလညျး နားလညျသူဖွဈ၏။ အပေါငျးအသငျးပေါငျးရာတှငျ စိတျတိုငျးကြ ရှေးခယျြပွီးမှ ပေါငျးတတျသူဖွဈသညျ။ စိတျခံစားမှုလှယျကူသျောလညျး မြိုသိပျနိုငျသူဖွဈသညျ။
သူတဈပါးအား ဆှဲဆောငျနိုငျသော စှမျးအားရှိသညျ။ မိတျဆှသေညျ စိတျဆိုးခဲ၏။ စိတျဆိုးလြှငျလညျး တျောတျောနှငျ့ မပွတေတျပေ။ မိတျဆှသေညျ မိသားစု၊ သားသမီးအပျေါ သံယောဇဉျကွီးသူဖွဈသညျ။ သို့သျော သားသမီးအကြိုးမပေးလှပေ။ သိမျသိမျမှမှေ့ေ့ နထေိုငျတတျသူဖွဈသညျ။
ကွငျနာစိတျကွီးမားသူဖွဈသညျ။ ရကျရောမှုရှိသညျ။ မညျသညျ့အခါမြှ တဈကိုယျကောငျးမဆနျတတျ။ အကွီးအကယျြ မကနြေပျမှုဖွဈပါက မညျသူ့မကျြနှာကိုမြှ မထောကျဘဲ လုပျခငျြသလို လုပျပဈတတျသညျ။ မိတျဆှသေညျ အပြျောအပါးကို နှဈသကျသျောလညျး
လုပျရမညျ့အလုပျနှငျ့ စညျးခွားထားတတျသညျ။ တဈခါတဈရံ မိမိကိုယျကို အထငျကွီးလှနျးတတျသညျ။ တဈခါတဈရံ မိမိ၏အရညျအခငျြးထကျ လြော့ရျြပငျ မိမိကိုယျကို အမှတျပေးတတျသညျ။ မညျသို့ဖွဈစေ သငျသညျ ကောငျးမှနျသောသူတဈဖွဈသညျမှာမလှဲပေ။
(၇) ရလြှငျမိတျဆှသေညျ ညဏျရညျညဏျသှေးကောငျးသူဖွဈသညျ။ ထကျလညျးအလှနျထကျမွတျသညျ။ အရာရာကိုမှနျကနျစှာတှေးချေါဆုံးဖွတျတတျသူဖွဈသညျ။ တဈယူသနျခေါငျးမာတတျသူလညျးဖွဈသညျ။ သူတဈပါး၏ထငျမွငျခကျြကိုမြားစှာအရေးမထားတတျသူလညျး
ဖွဈသညျ။ စိတျလှုပျရှားမှု လှယျကူသျောလညျး ခံစားမှုမြားစှာ မရှိတတျပေ။ မိတျဆှတှေငျ ကောငျးသော အရညျအခငျြးတဈခု ရှိနတေတျသညျ။ ထိုအရညျအခငျြးမှာ အရာရာကို ဂရုစိုကျ လလေ့ာတတျခွငျးပငျဖွဈသညျ။ မိတျဆှမှော ထူးခွားသောဟနျအမူအရာ၊
အသံနအေသံထား ရှိတတျ၏။ ဒေါသဖွဈလှယျသျောလညျး ပွပြေောကျမှုမွနျဆနျတတျ၏။ သဈလှငျတောကျပသော အဝတျအစားမြားကို မနှဈသကျတတျပေ။ မိတျဆှလေုပျသော အလုပျအကိုငျကို နှောငျ့ယှကျပါက လှနျစှာပငျ မုနျးတီးတတျသူဖွဈသညျ။
(၈) ရလြှငျမိတျဆှသေညျ လကျတှကေ့ကြ တှေးချေါတတျပွီး လကျတှကေ့ကြ လုပျကိုငျတတျသူဖွဈသညျ။ တဈခုခုလိုခငျြပွီဆိုလြှငျ တမျးတမျးစှဲဖွဈတတျသညျ။ စီးပှားရေးနှငျ့ပတျသကျရျြ အောငျမွငျထှနျးပေါကျအောငျ လုပျတတျသူလညျးဖွဈ၏။ မကွာခဏ သူတဈပါး၏
အထငျအမွငျလှဲမှားမှုကို ခံရတတျသညျ။ အစဉျသဖွငျ့ အားနညျးသူဘကျက ပါဝငျကူညီတတျသူဖွဈ၏။ မိမိကိုယျကို လှနျစှာအားကိုး၏။ သူတဈပါးကို အထငျမကွီးတတျလှပေ။ ထကျမွကျပါးနပျသောသူဖွဈ၏။ ကယျြပွနျ့သော ဗဟုသုတရှိသူလညျးဖွဈ၏။
ကယျြပွနျ့သော ဗဟုသုတရှိသူလညျးဖွဈသညျ။ စာပရေေးသားမှု ပွောငျမွောငျတတျသညျ။ အခြိုးကကြ ဝတျစား၍ အထကျတနျးကကြ နထေိုငျတတျသူဖွဈသညျ။ ငယျငယျရှယျရှယျနှငျ့ အိမျထောငျကတြတျသညျ။ ဒုကှမြားနှငျ့ မကွာခဏ ရငျဆိုငျတိုးသျောလညျး ကွံ့ကွံ့ခံနိုငျသူဖွဈသညျ။
(၉) ရလြှငျမိတျဆှသေညျ စိတျဓာတျခိုငျမာသူဖွဈသညျ။ စိတျဆိုးလှယျ၊ ဒေါသဖွဈလှယျတတျ၏။ စိတျကွီးသလောကျ ဇှဲလညျးဖွဈသူဖွဈ၏။ ခြုပျခယျြမှုကို မနှဈသကျတတျ။ စိတျမွနျလကျမွနျ လုပျတတျသညျ။ ဆှမြေိုးမြား၊ မိသားစုမြားနှငျ့ မကွာခဏ အဆငျမပွဖွေဈတတျသညျ။
မိတျဆှေ၏ စကားပွောဟနျပနျမှာ အမိနျ့ပေး၊ သွဇာပေးသကဲ့သို့ ရှိတတျ၏။ စကားအခအြေတငျပွောမှု၊ ငွငျးခုနျမှုကို အလှနျနှဈသကျတတျသူဖွဈသညျ။ လှတျလပျမှုကို မွတျနိုးသျောလညျး မိမိစိတျကိုမိမိ နိုငျသူဖွဈသညျ။ အခွားသူမြား၏ တားမွဈမှုကို ခြိုးဖောကျတတျသညျ။
မိမိဘာသာ အသိတရားနှငျ့ မလုပျသငျ့သညျကို ရှောငျတတျသညျ။ စိတျစှမျးအငျကွီးမားသူဖွဈ၏။ ဆုံးဖွတျခကျြမွနျရျြ မှနျကနျတတျသူဖွဈသညျ။ မိမိဖွဈခငျြသောဘဝကို မိမိဘာသာ ကွိုးစားရျြ ဖွဈအောငျလုပျနိုငျသူမြားဖွဈသညျ။ မညျသို့ဆိုစေ မိတျဆှသေညျ လူတျောတဈယောကျဖွဈသညျ။